आमा - AusMandu
By Ausmandu Last updated Nov 15, 2018
जब घरबाट कामको लागि निस्किन्छु, त्यतिबेला ‘म गएँ है’ भनेको सुनिदिने कोही हुँदैन । अनि.. कलेज जाँदा ‘मम्मी म गएँ है’ भनेको सम्झिन्छु अनि तिम्रो याद आउँछ ।
घरमा ‘यो तरकारी मन पर्दैन’ भन्दै झगडा गर्ने म, यहाँ चाउचाउ खाँदै हप्ता काट्दा तिमीले पकाएको दाल र तरकारीको याद आउँछ आमा ! मान्छेहरु भन्छन्, भगवान चारै तिर पुग्न नसक्ने भएर आमा बनाएको रे, तर आज मेरो भगवान म भन्दा टाढा छ । अनि यो ज्यान, मुर्ती बिनाको मन्दिर जस्तो भ’को छ आमा ।
घरी-घरी आफूलाई सम्हाल्न नसक्दा , तिमीले पुरै परिवार सम्हालेको याद आउँछ अनि तिमीलाई सम्झिन्छु आमा । खुशी भएको दिन तिमीलाई सम्झिन्छु आमा, दुखी भएको दिन तिमीलाई सम्झिन्छु । ‘मलाई त विश्वास गर’ भन्नेहरु माथी नै शंका लाग्छ, किनकी समय-परिस्थिति सबै बदलिएको छ । नबदलिने त तिम्रो – मेरो बीचको माया मात्र रै’छ आमा ।
अस्ट्रेलिया आएदेखी धेरै कुराको पछुतो लागेपनि केही कुरामा खुशी छु म । यो देशले मलाई मेरा बुबाआमाले कति माया गर्नुहुन्थ्यो भनी छर्लंग देखाएको छ, राम्रो र नराम्रो मान्छे चिन्न सिकाएको छ, आत्मनिर्भर हुन सिकाएको छ, सम्बन्ध गाँस्न सिकाएको छ, सम्बन्ध बुझ्न सिकाएको छ अनि दु:खमा पनि हाँस्न सिकाएको छ आमा ।
त्यसैले आशा अझै मरेको छैन, जित्छु एकदिन, अझै हारेको छैन,
डाँकाे छोडेर रुन मन छ, तर हाँस्न पनि छोडेको छैन ।
तिमी धेरै नआत्तिनु आमा, एकदिन फर्केर आउनेछु सधैको लागि, किनकी अब माया गर्ने पालो मेरो !!!
” छ मेरो एउटा सपना,
आमालाई हँसाउने !!! “
७१ वर्षिया यी बडीबिल्डर, जो ५९ वर्षको उमेरमा जीम जान सुरु गरेकी थिइन्
‘उ’ र ‘म’ कहिल्यै हामी हुन पाएनौं ।…